Indawo yokuhlala kwindawo entliziyweni yeSuffolk
"I-Wren Lodge"- isembindini welali ye-suffolk, iphefumlelwe luyilo lweNordic, le ndawo ibonelela ngeendawo ezikhanyayo ezivulekileyo. Ijikelezwe ngamasimi aluhlaza kunye nendalo. Iindlela zebhayisekile, iindlela zokuhamba, iilali ezincinci ezinomtsalane, ii-pubs zasekhaya, iidolophu ezinembali kunye neendawo ezibukekayo zonxweme zikufutshane.
Ukuhamba ngemizuzu eli-10 ukusuka kwidolophu ekufutshane kunye nodibaniso lwezothutho lwesizwe. Le ndawo ifanelekile ukuba isibini sibuye, okanye umhambi eyedwa ukuze aphumle kwaye ajonge okona kulungileyo kweSuffolk.
Le ndawo isandula ukwakhiwa kwaye ibekwe kwindlela yabucala, apho ngobusuku obucacileyo unokubona "iMilky Way" kunye neenkwenkwezi. Ikhabhathi yeNordic kunye nentabalala yeendawo zangaphandle, ivumela ipropathi ukuba yonwabele unyaka wonke.
Kukho ukufudumeza okuvela emoyeni unyaka wonke, kunye nesitshisi sombane sombane ebusika, ukuba unqwenela ukuba ne-toast eyongezelelweyo.
QAPHELA: Njengoko kubonakala kwimifanekiso, kukho umzila kaloliwe okufutshane onokushiya ingxolo ethile.
Le ndawo ikwindlela yabucala, kwaye ke izolile kwaye izolile nangona kunjalo ii-pubs zasekhaya kunye neevenkile zihamba ngemizuzu eli-10 kuphela okanye i-20 mins uhambe.
Ilali yegumbi- iHaughley kukuhamba ngemizuzu engama-20, inendawo yokubhaka yasekhaya, ivenkile, i-gastro pub esemgangathweni kunye nevenkile yokutyela ehloniphekileyo yaseIndiya.
Ezinye izinto ezibalaseleyo zasekhaya ziquka iBury St Edmunds idolophu eyimbali enenkcubeko eninzi kunye nembali. Malunga nemizuzu engama-45 uqhuba ukuya kunxweme olukhulu lweSuffolk, kunye neentlanzi ezidumileyo zehlabathi kunye neetships eAldeburgh! Eminye imisebenzi yokuzonwabisa yasekhaya kunye neelali ezithandekayo kunye needolophu zembali,
zingaphakathi kwemizuzu engama-30 yokuqhuba irediyasi.
Isikhululo sikaloliwe esikufuphi saseStowmarket sikumizuzu eli-10 ukunikezela ukufikelela lula eLondon, eCambridge naseNorwich kwabo banqwenela ukubandakanya utyelelo losuku lwesixeko.
Uya kusingathwa ngumamkeli wam, uLin, uhlala kwipropathi ekufutshane, kwaye uya kuba nakho ukukunika imibuzo okanye ulwazi lwendawo.